KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Bicol Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikongo Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Korean Korean Sign Language Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maya Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tatar Tetun Dili Thai Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Zulu
“Awurade Yesu Kristo adom nka honhom a moda no adi no.”​—FILEM. 25.
5 Su a ɛte saa hyɛɛ ase akyɛ. Mose bere so no, Kora tew mpanyimfo a na wodi Israel asafo no anim so atua. Wɔn a Kora tuu n’ani sii wɔn so titiriw ne Aaron ne ne mma no; wɔn na na wɔsom sɛ asɔfo. Ebia Kora huu wɔn sintɔ ahorow. Anaa ebetumi aba sɛ onyaa adwene sɛ Mose yɛ animhwɛ, kyerɛ sɛ ɔde n’abusuafo asisi baabi papa. Sɛ eyi na ɛmaa Kora tew atua oo, sɛ nso biribi foforo oo, asɛm no ne sɛ na ne nsusuwii ne Yehowa de nhyia. Ná Kora mmu mmarima a Yehowa apaw wɔn no koraa. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yɛabrɛ mo! . . . Adɛn nti na moama mo ho so wɔ Yehowa asafo so saa?” (Num. 16:3) Bio nso Datan ne Abiram nwiinwii, na wɔka kyerɛɛ Mose sɛ ‘ɔpɛ sɛ odi wɔn so bakomasɛm.’ Bere a Mose soma kɔfrɛɛ wɔn no, wɔkae sɛ: “Yɛremma baabiara!” (Num. 16:12-14) Yehowa ani annye aniammɔho a ɛte saa ho, enti okum atuatewfo no nyinaa.​—Num. 16:28-35.
6 Afeha a edi kan no mu nso, mmarima bi kasa tiaa wɔn a wodi asafo no anim no. Na “wommu tumidi” koraa. (Yuda 8) Ɛbɛyɛ sɛ na saa mmarima no ani nsɔ hokwan a wɔwɔ wɔ asafo no mu. Na mpanyimfo a wɔwɔ asafo no mu ani ku adwuma a Onyankopɔn de ahyɛ wɔn nsa no ho, nanso atuatewfo yi sɛee mpanyimfo no kyerɛɛ afoforo.​—Monkenkan 3 Yohane 9, 10.
8 Bible ka sɛ ‘nsoromma ason wɔ Yesu nsa nifa mu.’ Sɛ yɛma saa asɛm no tena yɛn adwenem a, ɛbɛboa yɛn ma yɛayi saa su no akwa. “Nsoromma” no gyina hɔ ma ahwɛfo a wɔasra wɔn. Nanso yɛreka a, ɛfa asafo mu mpanyimfo nyinaa ho. Yesu betumi adannan “nsoromma” a wɔwɔ ne nsam no sɛnea ɔpɛ biara. (Adi. 1:16, 20) Esiane sɛ Yesu ne asafo no Ti nti, onim biribiara a ɛrekɔ so wɔ mpanyimfo kuw no mu. Yesu ‘ani te sɛ ogyaframa,’ ohu biribiara. Enti sɛ ehia paa sɛ ɔteɛ ɔpanyin bi a, ɔno ara bɛhwɛ ma wɔateɛ no sɛnea ɔpɛ ne bere a ɛsɛ mu. (Adi. 1:14) Enkosi sɛ Yesu bɛyɛ saa no, ɛsɛ sɛ yɛde obu a ɛfata ma mpanyimfo a honhom kronkron apaw wɔn no. Paulo kyerɛwee sɛ: “Monyɛ osetie mma wɔn a wodi mo anim no na mommrɛ mo ho ase mma wɔn, efisɛ wɔn na wɔhwɛ mo kra so sɛ nnipa a wobebu ho akontaa; ɛno bɛma wɔde anigye ayɛ eyi, na ɛnyɛ ahomegu, anyɛ saa a ɛrensi mo yiye.”​—Heb. 13:17.
9 Sɛ wɔteɛ Kristoni bi so anaa wogye hokwan bi a ɔwɔ wɔ asafo no mu fi ne nsam a, nea ɔbɛyɛ na ɛbɛkyerɛ sɛ ɔwɔ suban pa anaa subammɔne. Na onua aberantewa bi de video so agoru a awudisɛm wom gyigye n’ani, enti mpanyimfo ne no kasae tuu no fo. Awerɛhosɛm ne sɛ wantie afotu no, enti wogyee hokwan a ɔwɔ sɛ asafo mu somfo fii ne nsam, efisɛ na ne nneyɛe ne nea Kyerɛwnsɛm no ka wɔ asomfo ho no nhyia. (Dw. 11:5; 1 Tim. 3:8-10) Ɛbaa saa no, onua no bɔɔ no dawuru sɛ ɔne mpanyimfo no nyɛ adwene, na ɔkyerɛkyerɛw mpanyimfo no ho nsɛm kɔɔ Betel. Afei nso otutu guu afoforo asom sɛ wɔn nso nyɛ saa ara. Nanso nokwasɛm ne sɛ, sɛ yɛpɛ sɛ yɛma obiara hu sɛ yɛn asɛm yɛ dɛ na ɛno nti yɛsɛe asomdwoe a ɛwɔ asafo no mu a, ɛremmoa obiara. Sɛ wɔteɛ yɛn so a, momma yemmu no sɛ biribi a wɔde rebue yɛn ani ma yɛahu yɛn mmerɛwyɛ. Enti ɛsɛ sɛ yɛyɛ komm gye nteɛso no tom.​—Monkenkan Kwadwom 3:28, 29.
11 Ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ ɛyɛ Yehowa ankasa na wama mpanyimfo no asɛyɛde sɛ ‘wɔnhwɛ Onyankopɔn asafo so.’ (Aso. 20:28; 1 Pet. 5:2) Enti yɛyɛ mpanyimfo oo, yɛnyɛ mpanyimfo oo, ɛsɛ sɛ yegye ɔkwan a Onyankopɔn fa so yɛ nneɛma no tom. Sɛ yɛwɔ suban pa a, yɛremfa yɛn adwene nsi dibea anaa hokwan bi a yebenya so. Bere a Ɔhene Saul nyaa adwene sɛ anhwɛ n’ahenni bɛkɔ akodi Dawid nsam no, Saul “nyaa Dawid ho adwemmɔne.” (1 Sam. 18:9) Ná adwene a Saul kura nyɛ papa, na na ɔpɛ sɛ okum Dawid mpo. Ɛnsɛ sɛ yesuasua Saul na yɛpere dibea, na mmom ɛsɛ sɛ yesuasua Dawid. Amanehunu a Dawid faa mu nyinaa akyi no, wanteɛ ne nsa wɔ wɔn a Onyankopɔn apaw wɔn so da.​—Monkenkan 1 Samuel 26:23.
12 Ɛnyɛ bere nyinaa na yɛne yɛn nuanom adwene behyia wɔ nsɛm bi ho. Sɛ yɛanhwɛ yiye a, eyi de akameakame bɛba yɛn ntam. Ebetumi aba asafo mu mpanyimfo mpo ntam. Bible boa yɛn ma yehu su a ɛsɛ sɛ yenya. Ɛka sɛ: “Munni kan mfa nidi mma mo ho mo ho” na “monnyɛ mo ani so anyansafo.” (Rom. 12:10, 16) Sɛ asɛm bi si a, ɛnsɛ sɛ yɛka sɛ kyenkyen ara a, yɛn asɛm na ɛyɛ dɛ. Mmom momma yɛnkae sɛ nyansa nni biakofo tirim—akwan pii wɔ hɔ a yebetumi afa so ayɛ biribi. Sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yebetie afoforo adwene a, ɛbɛma biakoyɛ atena asafo no mu.​—Filip. 4:5.
15 Bere a yɛreka bɔne fafiri yi, onipa biako a yebetumi asuasua no ne Hiob. Ne nnamfo baasa a anka ɛsɛ sɛ wɔkyekye ne werɛ no hyɛɛ no awerɛhow mmom. Nanso Hiob de firii wɔn. Dɛn na ɛboaa no ma ɔde firii wɔn? ‘Ɔbɔɔ mpae maa ne nnamfo no.’ (Hiob 16:2; 42:10) Sɛ yɛbɔ mpae ma afoforo a, ebetumi ama yɛanya wɔn ho adwempa. Yɛbɔ mpae ma yɛn nuanom Kristofo nyinaa a, ɛbɛboa ma yɛadɔ wɔn sɛnea Kristo dɔ wɔn no. (Yoh. 13:34, 35) Afei nso ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae hwehwɛ honhom kronkron. (Luka 11:13) Yɛne afoforo redi a, Onyankopɔn honhom bɛboa yɛn ma yɛada su pa adi.​—Monkenkan Galatifo 5:22, 23.
16 Sɛ yɛn mu biara bɔ mmɔden sɛ ɔbɛboa ma su pa atena asafo no mu a, emu bɛyɛ anika ankasa! Bere a yɛasusuw eyi nyinaa ho no, ebia yebehu sɛ yɛtɔ sin wɔ biribi mu ma enti ehia sɛ yɛyɛ ho adwuma. Sɛ saa na ɛte a, ɛnsɛ sɛ yɛtenatena ho, na mmom ɛsɛ sɛ Onyankopɔn Asɛm no boa yɛn ma yɛyɛ nsakrae. (Heb. 4:12) Ná Paulo pɛ sɛ ɔyɛ nhwɛso a afoforo betumi asuasua wɔ asafo no mu. Ɔkae sɛ: “Minnim asɛm biara a ɛwɔ me ho. Nanso eyi mma minni bem, na nea odi m’asɛm ne Yehowa.”​—1 Kor. 4:4.
17 Sɛ yɛde nyansa a efi soro no yɛ adwuma na yɛampere tumidi anaa yɛanka sɛ kyenkyen ara a yɛn asɛm na ɛyɛ dɛ a, ɛbɛboa ma su pa atena asafo no mu. Yɛde yɛn nuanom bɔne firi wɔn na yenya wɔn ho adwempa a, ɛbɛboa ma yɛne wɔn atena kama. (Filip. 4:8) Yɛyɛ saa a, yebetumi anya ahotoso sɛ Yehowa ne Yesu ani bɛsɔ ‘honhom a yɛda no adi no.’​—Filem. 25.
Share Share Honhom Bɛn na Woda no Adi?
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 2012